Madaniga 3D - Geofumadas
FreeCAD 3D Bilaash ah - Revit - Microstation V8i 3D
Maanta oo internetka la joogo, waxbarashadu mar dambe cudurdaar ma noqonayso. Markaad ogaatid algorithms-yadaas waligaa ma ogaan kartid inay jiraan dhisida Rubik's cube ee dugsiga sare si aad u qaadato koorsooyin AutoCAD bilaash ah khadka tooska ah. Muhiimadda qaabeynta 3D Waxaan ka warqabnaa in mustaqbalka CAD uu ku jiro qaabeynta loo yaqaan BIM.
Cadapult wuxuu dhowaan ku dhawaaqay daabacaadda daabacaaddiisa cusub: Digging Deeper Into AutoCAD Civil 3D 2011 416 bog oo lagu abaabulay 7 cutub iyo CD ay ku jiraan layliyada lagu horumariyay qayb kasta, iyadoo uu hagayo Rick Ellis. Marka la soo koobo, helitaan weyn oo loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu si wanaagsan u barto Civil 3D oo uu kordhiyo ...
… Tan ugufiican, kadib markii AUGI MexCA dayactirka went Waqti kahor waxaan dib u eegis ku sameeyay AUGI cutubkeeda kuleylaha, qadar qiimo badan oo kheyraad ahna u leh isticmaaleyaasha AutoCAD Civil3D iyo teknolojiyada Khariidada. Nasiib darrose boggu wuxuu galay dayactir in kabadan hal sano ka hor, cusbooneysiin aan sugeynay ...
Wixii mashaariic injineernimo ah, oo ku lug leh horumarinta guryaha, jidadka, muuqaalka guud iyo shabakadaha tuubbada AutoCAD Civil 3D 2011 waxay cadeyneysaa inay tahay qalab qiimo leh. Kadib isbeddelka ku dhacay barnaamijkan, qaybta 2011 waxaan arki karnaa bisayl badan oo dadka isticmaala si ay ula qabsadaan isdhexgalka cusub ka dib wax yar ...
Ku boodbooyin iyo soohdin Facebook wuxuu noqonayaa aalad caadi u ah ganacsiga iyo ujeeddooyinka waxbarasho. Maaddaama ay tahay "Internetka dadka", shirkaduhu waxay dib u eegeen dadkan fara ku tiriska ah ee isku xidhan, taas oo siisay qiimo ka baxsan shabakadda bulshada ee caadiga ah. Mid ka mid ah astaamaha ugufiican waa ...
Horaantii waxaan aragnay sida loo abuuro khadadka qaabdhismeedka laga bilaabo shabakad dhibco lagu qaatay berrinka. Hadda waxaan arki doonaa sida loo sameeyo, laga soo bilaabo curveyaasha jira ee khariidad la marsiiyey. Sidii aan ku sameynay naqshadeynta waddada, waxaan u kala jabin doonnaa tallaabooyin, si aan boostadu u soo bixin wax ka dheer fart ...
Bishii Nofeembar ee sanadkii hore waxaan sameeyay qiimeyn ku saabsan nooca 1 ee Qalabka PlexEarth ee loogu talagalay AutoCAD, oo ka mid ah hal-abuurnimadiisa waxaa ka mid ah isdhexgalka AutoCAD iyo Google Earth. Mawduucan waxaa ku jira horumarin sida Stitchmaps, Kmler, CounturingGE, kml2kml, kiiska Plex, sidaan qabo, waa mid ka mid ah horumarada ugu wanaagsan ee aan ku soo arkay ...
Lisp loogu talagalay beddelaadyada iyo hawlgallada 1. Cagaha u rogo mitir iyo dhinaca kale Nidaamkan joogtada ah ee laga sameeyay Autolisp, wuxuu noo oggolaanayaa inaan u beddelo qiimaha la soo geliyey cagaha illaa mitir iyo tan kale, natiijada ayaa lagu soo bandhigayaa khadka taliska. Halkan waxaan sidoo kale u adeegsannaa shaqada 'CVunit', shaqadan lisp waxay ka heleysaa qiimaha beddelka feylka acad.unt ...
Rabitaanka guud ee isticmaalaha 'AutoCAD user' waa inuu ku xirnaado Google Earth, inuu awood u yeesho inuu ka shaqeeyo sawirka ay caruurtu ku ciyaaraan, in kasta oo saxnimadiisa ay su'aal ka taagan tahay, maalin kasta waxaan helnaa waxyaabo ka fiican oo waa waxtar halkii aan waxba lahayn. Maanta waxaan arki doonaa ugu yaraan laba beddelaad oo la sameeyo: A. Iyadoo la adeegsanayo amarka ImportGEImage Tani ...
3D Dwg Google Earth PlexEarth
Yaan rabin inuu yeesho miis isbarbardhigaya noocyada kala duwan ee barnaamijka GIS iyo shaqooyinka loogu talagalay sahaminta si go'aan looga gaaro iibsiga. Waa hagaag, waxaas oo kale ayaa ka jira Barta Bilowga, oo ay ku jiraan soosaarayaasha isticmaalka caanka ah sida AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, iyo sidoo kale soo saarayaasha qalabka sida Topcom, Leica iyo ...